Ineternational Celebrity – THE NEWS TODAY
Category: Ineternational Celebrity
ဘ၀တစ်လျှောက်ကြုံတွေ့ ခဲ့ရတဲ့ ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုတွေကို ရင်ဖွင့်လာတဲ့ ဂျက်စတင်ဘီဘာ
ကမ္ဘာကျော်ဆယ်လီဘရစ်တို့ ရဲ့ ဘ၀တွေဟာ ပရိသတ်တော်တော်များများထင်နေကြသလို အမြဲတမ်းစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်နေလေ့မရှိကြပါဘူး။ ပိုက်ဆံတွေဘယ်လောက်ပဲ ရှာဖွေနိုင်ပါစေ၊ ဘ၀အမောတွေ၊ မိသားစုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သောကတွေ၊ အချစ်ရေးအဆင်မပြေမှုတွေကိုတော့ မဖြေရှင်းနိုင်တာအမှန်ပါပဲ။ ကမ္ဘာကျော်ဆယ်လီတွေထဲက တစ်ယောက်အပါအ၀င်ဖြစ်တဲ့ ပေါ့ပ်အဆိုတော် ဂျက်စတင်ဘီဘာဟာလည်း မကြာခင်ထွက်ရှိလာတော့မယ့် Vogue မဂ္ဂဇင်းထဲက အင်တာဗျူးမှာ စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေများတာကြောင့် စိတ်ငြိမ်ဆေးတွေ အလွန်အကျွံသုံးစွဲခဲ့မိကြောင်းကို အခုလိုပဲ ရင်ဖွင့်ပြောပြထားတာကို တွေ့ ရပါတယ်။
” ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ အရှုပ်ထုပ်တွေချည်းပဲ လုပ်ခဲ့မိပါလားဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဆင်ခြင်မိပါတယ်၊ လူတကာနဲ့ လိင်ဆက်ဆံတာမျိုးတွေလည်း လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်။ အဲ့လိုအမှားတွေကင်းအောင်၊ စိတ်ငြိမ်သွားအောင် Xanax ဆေးတွေကို အလွန်အကျွံသောက်ခဲ့ဖူးပါတယ်(Xanax ဆေးဟာ စိတ်ကျနေချိန်မျိုးမှာ သောက်ရတဲ့အိပ်ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အလွန်အကျွံသုံးစွဲမိရင်လည်း ဆေးစွဲသလို စွဲနေတတ်ပါတယ်)”
” မိန်းကလေးတိုင်းကို လေးစားမှုအပြည့်ထားပြီး ဆက်ဆံပြောဆိုရမယ်လို့ အမေက ကျွန်တော့်ကိုအမြဲသင်ပါတယ်။ အဲ့စကားကိုတော့ အမြဲမှတ်ထားတတ်လို့ မိန်းကလေးတွေနဲ့ ပတ်သက်တိုင်း ကျွန်တော်အမြဲဆင်ခြင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် အဲ့လိုနေရတာ ကျွန်တော့်အတွက် လုံးဝအဆင်မပြေဘူးလေ၊ အဲ့ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်စိတ်ကိုသက်သာရာရစေတဲ့ ဆေးတွေကို အလွန်အကျွံသုံးစွဲခဲ့မိပါတယ်”
” လူတွေတော်တော်များများက ကျွန်တော်ဘာပဲလုပ်လုပ် အမြဲဝေဖန်ကြတယ်၊ သေးပေါက်ချတာ၊ မျောက်မွေးတာကအစ ရေးကြီးခွင်ကျယ်လုပ်ပြီးပြောကြတယ်။ တစ်ကယ်လို့ သူတို့ သာ ကျွန်တော့်လို ချမ်းသာနေမယ်ဆိုရင် သူတို့ လည်း မျောက်မွေးချင်မွေးမယ်၊ တစ်ခြားလုပ်ချင်တာတွေလည်း အကုန်လုပ်ကြမှာပဲလေ” လို့ Justin က Vogue နဲ့ အင်တာဗျူးမှာ သူခံစားခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို ရင်ဖွင့်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
အိပ်ဆေးတွေ အလွန်အကျွံသုံးစွဲတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း … ” အဲ့တုန်းက တော်တော်လေးအခြေအနေဆိုးခဲ့ပါတယ်။ ညတိုင်းညတိုင်း security က ကျွန်တော့်အခန်းထဲလာပြီး ကျွန်တော်အခြေအနေကောင်းရဲ့ လား၊ သွေးခုန်နှုန်းတွေစမ်းပြီး အသက်ရှူနေသေးလားဆိုတာကို စစ်ဆေးရတယ်” လို့ လည်း JB က ဆိုပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး … ” Tour လှည့်နေတဲ့အတောအတွင်းမှာလည်း ကျွန်တော် Depression တွေ တော်တော်ဝင်ခဲ့တယ်။ ဒီအကြောင်းတွေ ကျွန်တော် ဘယ်သူ့ ကိုမှ မပြောပြခဲ့ဖူးပါဘူး၊ အခုလည်း ဘယ်သူမှမသိသေးတဲ့ ပြဿနာပေါင်းစုံနဲ့ ကျွန်တော် ရင်ဆိုင်နေရတုန်းပဲ၊ တစ်ကယ်တော့ လူတွေမမြင်နိုင်တဲ့ ကျွန်တော့်တစ်ဖက်ခြမ်းမှာ တော်တော်လေးကို အထီးကျန်နေရပါတယ်။ ကျွန်တော့်နားမှာရှိနေတဲ့သူတွေကလည်း ကျွန်တော့်အသုံးချချင်လို့ ကပ်နေတာလား၊ လိုချင်တာရရင် ကျွန်တော့်ကိုထားသွားမှာလားဆိုတဲ့ သံသယတွေနဲ့ ကျွန်တော်ရုန်းကန်နေရဆဲပါပဲ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း အချစ်ရေးမှာရော၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာပါ တော်တော်လေးဆိုးရွားတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့်ကိုယ်ကျွန်တော်ပဲ ယုံကြည်တော့တယ်” လို့ JB က သူ့ ဘ၀တစ်လျှောက် ကြုံတွေ့ နေတဲ့ ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးလည်း ရင်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးရေ၊ JB ကတော့ သူဖြတ်သန်းလာရတဲ့ ဘ၀တစ်လျှောက်မှာ ဖြတ်သန်းကြုံတွေ့ ခဲ့ရတဲ့ ဒုက္ခဆင်းရဲတွေ၊ တစ်သက်လုံးမြိုသိပ်လာခဲ့ရတဲ့ ဖိအားတွေကို အခုလိုပဲ ရင်ဖွင့်ပြောပြလိုက်ပါပြီ။ JB တစ်ယောက် အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ ဖိအားတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရမှန်း တစ်ကယ်ကို မထင်ခဲ့မိတာအမှန်ပါ။ ပရိသတ်တွေကို တန်ဖိုးထားတဲ့ JB တစ်ယောက် ကျန်ရှိနေတဲ့ဘ၀မှာ အချစ်ဆုံးသူတွေနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ကမ်ဘာကြျောဆယျလီဘရဈတို့ရဲ့ဘဝတှဟော ပရိသတျတျောတျောမြားမြားထငျနကွေသလို အမွဲတမျးစိတျခမျြးသာပြျောရှငျနလေမေ့ရှိကွပါဘူး။ ပိုကျဆံတှဘေယျလောကျပဲ ရှာဖှနေိုငျပါစေ၊ ဘဝအမောတှေ၊ မိသားစုနဲ့ပတျသကျတဲ့ သောကတှေ၊ အခဈြရေးအဆငျမပွမှေုတှကေိုတော့ မဖွရှေငျးနိုငျတာအမှနျပါပဲ။ ကမ်ဘာကြျောဆယျလီတှထေဲက တဈယောကျအပါအဝငျဖွဈတဲ့ ပေါ့ပျအဆိုတျော ဂကျြစတငျဘီဘာဟာလညျး မကွာခငျထှကျရှိလာတော့မယျ့ Vogue မဂ်ဂဇငျးထဲက အငျတာဗြူးမှာ စိတျပငျပနျးမှုတှမြေားတာကွောငျ့ စိတျငွိမျဆေးတှေ အလှနျအကြှံသုံးစှဲခဲ့မိကွောငျးကို အခုလိုပဲ ရငျဖှငျ့ပွောပွထားတာကို တှရေ့ပါတယျ။
” ကြှနျတေျာ့ဘဝမှာ အရှုပျထုပျတှခေညျြးပဲ လုပျခဲ့မိပါလားဆိုပွီး ကိုယျ့ကိုယျကိုယျဆငျခွငျမိပါတယျ၊ လူတကာနဲ့လိငျဆကျဆံတာမြိုးတှလေညျး လုပျခဲ့ဖူးတယျ။ အဲ့လိုအမှားတှကေငျးအောငျ၊ စိတျငွိမျသှားအောငျ Xanax ဆေးတှကေို အလှနျအကြှံသောကျခဲ့ဖူးပါတယျ(Xanax ဆေးဟာ စိတျကနြခြေိနျမြိုးမှာ သောကျရတဲ့အိပျဆေးတဈမြိုးဖွဈပွီး အလှနျအကြှံသုံးစှဲမိရငျလညျး ဆေးစှဲသလို စှဲနတေတျပါတယျ)”
” မိနျးကလေးတိုငျးကို လေးစားမှုအပွညျ့ထားပွီး ဆကျဆံပွောဆိုရမယျလို့အမကေ ကြှနျတေျာ့ကိုအမွဲသငျပါတယျ။ အဲ့စကားကိုတော့ အမွဲမှတျထားတတျလို့မိနျးကလေးတှနေဲ့ပတျသကျတိုငျး ကြှနျတျောအမွဲဆငျခွငျပါတယျ၊ ဒါပမေယျ့ အဲ့လိုနရေတာ ကြှနျတေျာ့အတှကျ လုံးဝအဆငျမပွဘေူးလေ၊ အဲ့ဒါကွောငျ့ ကြှနျတေျာ့စိတျကိုသကျသာရာရစတေဲ့ ဆေးတှကေို အလှနျအကြှံသုံးစှဲခဲ့မိပါတယျ”
” လူတှတေျောတျောမြားမြားက ကြှနျတျောဘာပဲလုပျလုပျ အမွဲဝဖေနျကွတယျ၊ သေးပေါကျခတြာ၊ မြောကျမှေးတာကအစ ရေးကွီးခှငျကယျြလုပျပွီးပွောကွတယျ။ တဈကယျလို့သူတို့သာ ကြှနျတေျာ့လို ခမျြးသာနမေယျဆိုရငျ သူတို့လညျး မြောကျမှေးခငျြမှေးမယျ၊ တဈခွားလုပျခငျြတာတှလေညျး အကုနျလုပျကွမှာပဲလေ” လို့Justin က Vogue နဲ့အငျတာဗြူးမှာ သူခံစားခဲ့ရတဲ့ အဖွဈအပကျြတှကေို ရငျဖှငျ့ပွောပွခဲ့ပါတယျ။
အိပျဆေးတှေ အလှနျအကြှံသုံးစှဲတာနဲ့ပတျသကျပွီးတော့လညျး … ” အဲ့တုနျးက တျောတျောလေးအခွအေနဆေိုးခဲ့ပါတယျ။ ညတိုငျးညတိုငျး security က ကြှနျတေျာ့အခနျးထဲလာပွီး ကြှနျတျောအခွအေနကေောငျးရဲ့လား၊ သှေးခုနျနှုနျးတှစေမျးပွီး အသကျရှူနသေေးလားဆိုတာကို စဈဆေးရတယျ” လို့လညျး JB က ဆိုပါတယျ။
ဆကျလကျပွီး … ” Tour လှညျ့နတေဲ့အတောအတှငျးမှာလညျး ကြှနျတျော Depression တှေ တျောတျောဝငျခဲ့တယျ။ ဒီအကွောငျးတှေ ကြှနျတျော ဘယျသူ့ကိုမှ မပွောပွခဲ့ဖူးပါဘူး၊ အခုလညျး ဘယျသူမှမသိသေးတဲ့ ပွဿနာပေါငျးစုံနဲ့ကြှနျတျော ရငျဆိုငျနရေတုနျးပဲ၊ တဈကယျတော့ လူတှမေမွငျနိုငျတဲ့ ကြှနျတေျာ့တဈဖကျခွမျးမှာ တျောတျောလေးကို အထီးကနျြနရေပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့နားမှာရှိနတေဲ့သူတှကေလညျး ကြှနျတေျာ့အသုံးခခြငျြလို့ကပျနတောလား၊ လိုခငျြတာရရငျ ကြှနျတေျာ့ကိုထားသှားမှာလားဆိုတဲ့ သံသယတှနေဲ့ကြှနျတျောရုနျးကနျနရေဆဲပါပဲ။ ကြှနျတျောကိုယျတိုငျလညျး အခဈြရေးမှာရော၊ ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေးမှာပါ တျောတျောလေးဆိုးရှားတဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြတှခေခြဲ့ဖူးပါတယျ။ အခုအခြိနျမှာတော့ ကြှနျတေျာ့ကိုယျကြှနျတျောပဲ ယုံကွညျတော့တယျ” လို့JB က သူ့ဘဝတဈလြှောကျ ကွုံတှနေ့တေဲ့ ပငျပနျးဆငျးရဲမှုတှနေဲ့ပတျသကျပွီးလညျး ရငျဖှငျ့ခဲ့ပါတယျ။
ပရိသတျကွီးရေ၊ JB ကတော့ သူဖွတျသနျးလာရတဲ့ ဘဝတဈလြှောကျမှာ ဖွတျသနျးကွုံတှခေဲ့ရတဲ့ ဒုက်ခဆငျးရဲတှေ၊ တဈသကျလုံးမွိုသိပျလာခဲ့ရတဲ့ ဖိအားတှကေို အခုလိုပဲ ရငျဖှငျ့ပွောပွလိုကျပါပွီ။ JB တဈယောကျ အသကျငယျငယျလေးနဲ့ဒီလောကျကွီးမားတဲ့ ဖိအားတှနေဲ့ရငျဆိုငျနရေမှနျး တဈကယျကို မထငျခဲ့မိတာအမှနျပါ။ ပရိသတျတှကေို တနျဖိုးထားတဲ့ JB တဈယောကျ ကနျြရှိနတေဲ့ဘဝမှာ အခဈြဆုံးသူတှနေဲ့ပြျောပြျောရှငျရှငျနနေိုငျပါစလေို့ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
ထိုင်းနာမည်ကျော် ရိုးရာအငြိမ့်မင်းသမီး ကားတိုက်မှုတွင် သေဆုံး
နယ်ကို ဇာတ်ကဖို့သွားရင်း ဒီကနေ့ နံနက်ပိုင်းက ကားတိုက်မှုမှာ သေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ ထိုင်းရိုးရာ ကဇာတ်ပွဲ အငြိမ့်မင်းသမီး “ပို” ပရထုန် ဖြစ်ပါတယ်။
အငြိမ့်ကဖို့ ခွန်ကင်ခရိုင်ကိုအသွား အဝေးပြေးလမ်းမမှာ သူမလိုက်ပါလာတဲ့ Toyota Yaris တိုရိုတာ အဖြူရောင်ကားနဲ့ အနက်ရောင် ကားတစ်စီးတို့ တိုက်မိခဲ့ကြတာပါ။
ဇာတ်မင်းသမီး လိုက်ပါလာတဲ့ အဖြူရောင်ကားရှေ့ပိုင်း ကြေမွှ သွားခဲ့ပါတယ်။ အရှိန်နဲ့ ဝင်တိုက်မိခဲ့တာကြောင့် ကားတွင်း လိုက်ပါလာသူ သုံးဦးဟာ ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာ ရသွားခဲ့ရာမှာ ဇာတ်မင်းသမီးဟာ အတွင်းဒဏ်ရာနဲ့ ဆေးရုံမှာသေဆုံး သွားခဲ့ပါတယ်။
ယ နေ့ တိုင် ဆက် လက် ခေတ် စား ရှင် သန် နေ ဆဲ ထိုင်း ရိုး ရာ အ ငြိမ့် က ဇာတ် ပွဲ က တဲ့ မင်း သ မီး မင်း သား တွေ ဟာ ရုပ် ရှင် သ ရုပ် ဆောင် တွေ ထက် ပို ပြီး ဈေး ရ ကြ ပါ တယ်။
အနုပညာရှင်တွေ ဝင်ငွေကောင်းရနေတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အောက်ခြေ ဇာတ်သမား တစ်ဦးရဲ့ ညကြေးဟာ ဘတ်ငွေ ၁၀၀၀ ကျော် (ကျပ် ၅၀၀၀၀) ရပါတယ်။
အောင် မြင် တဲ့ ဇာတ် သ ဘင် ပ ညာ ရှင် တွေ ဟာ ရုပ် ရှင် လော က ကို တ ဆင့် ဝင် ရောက် သွား ခဲ့ ကြ တာ များ ပါ တယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အချမ်းသားဆုံး အနုပညာရှင်စာရင်းဝင် ဟာသ သရုပ်ဆောင် မန် ဂျော့မွတ် Mum Jokmok ဟာ ရိုးရာဇာတ်ပွဲ လူရွှင်တော်ဘ၀ ကနေ ကူးခဲ့သူပါ ။
သူ ရဲ့ ချမ်း သာ မှု ဟာ ဘတ် သန်း ပေါင်း ၂၀၀ ကျော် ပါ တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ဇာတ်ပွဲ အငြိမ့်သဘင် ခေတ်ပျက်သွားပြီး ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားတွေတောင် မရိုက်နိုင်တော့လို့ မင်းသားမင်းသမီးတွေဟာ ထမင်းဆိုင် အထည်ဆိုင်တွေ ဖွင့်ပြီး စီးပွားရေး ဝင်ငွေရှာနေရကြောင်း သိရပါတယ်။
ထိုငျးနာမညျကြျော ရိုးရာအငွိမျ့မငျးသမီး ကားတိုကျမှုတှငျ သဆေုံး
နယျကို ဇာတျကဖို့သှားရငျး ဒီကနေ့ နံနကျပိုငျးက ကားတိုကျမှုမှာ သဆေုံးသှားခဲ့တဲ့ ထိုငျးရိုးရာ ကဇာတျပှဲ အငွိမျ့မငျးသမီး “ပို” ပရထုနျ ဖွဈပါတယျ။
အငွိမျ့ကဖို့ ခှနျကငျခရိုငျကိုအသှား အဝေးပွေးလမျးမမှာ သူမလိုကျပါလာတဲ့ Toyota Yaris တိုရိုတာ အဖွူရောငျကားနဲ့ အနကျရောငျ ကားတဈစီးတို့ တိုကျမိခဲ့ကွတာပါ။
ဇာတျမငျးသမီး လိုကျပါလာတဲ့ အဖွူရောငျကားရှပေို့ငျး ကွမှေ သှားခဲ့ပါတယျ။ အရှိနျနဲ့ ဝငျတိုကျမိခဲ့တာကွောငျ့ ကားတှငျး လိုကျပါလာသူ သုံးဦးဟာ ဒဏျရာပွငျးထနျစှာ ရသှားခဲ့ရာမှာ ဇာတျမငျးသမီးဟာ အတှငျးဒဏျရာနဲ့ ဆေးရုံမှာသဆေုံး သှားခဲ့ပါတယျ။
ယ နေ့ တိုငျ ဆကျ လကျ ခတျေ စား ရှငျ သနျ နေ ဆဲ ထိုငျး ရိုး ရာ အ ငွိမျ့ က ဇာတျ ပှဲ က တဲ့ မငျး သ မီး မငျး သား တှေ ဟာ ရုပျ ရှငျ သ ရုပျ ဆောငျ တှေ ထကျ ပို ပွီး ဈေး ရ ကွ ပါ တယျ။
အနုပညာရှငျတှေ ဝငျငှကေောငျးရနတေဲ့ ထိုငျးနိုငျငံမှာ အောကျခွေ ဇာတျသမား တဈဦးရဲ့ ညကွေးဟာ ဘတျငှေ ၁၀၀၀ ကြျော (ကပျြ ၅၀၀၀၀) ရပါတယျ။
အောငျ မွငျ တဲ့ ဇာတျ သ ဘငျ ပ ညာ ရှငျ တှေ ဟာ ရုပျ ရှငျ လော က ကို တ ဆငျ့ ဝငျ ရောကျ သှား ခဲ့ ကွ တာ မြား ပါ တယျ။
ထိုငျးနိုငျငံမှာ အခမျြးသားဆုံး အနုပညာရှငျစာရငျးဝငျ ဟာသ သရုပျဆောငျ မနျ ဂြော့မှတျ Mum Jokmok ဟာ ရိုးရာဇာတျပှဲ လူရှငျတျောဘ၀ ကနေ ကူးခဲ့သူပါ ။
သူ ရဲ့ ခမျြး သာ မှု ဟာ ဘတျ သနျး ပေါငျး ၂၀၀ ကြျော ပါ တယျ။
မွနျမာနိုငျငံမှာတော့ ဇာတျပှဲ အငွိမျ့သဘငျ ခတျေပကျြသှားပွီး ရုပျရှငျ ဇာတျကားတှတေောငျ မရိုကျနိုငျတော့လို့ မငျးသားမငျးသမီးတှဟော ထမငျးဆိုငျ အထညျဆိုငျတှေ ဖှငျ့ပွီး စီးပှားရေး ဝငျငှရှောနရေကွောငျး သိရပါတယျ။
Hailey Bieber တွဲခဲ့ဖူးသမျှ ရည်းစားဟောင်းတွေ
Taylor Swift ရဲ့ သီချင်းလေးအတိုင်းပဲ She’s notasaint, and she’s not what you think ဆိုသလိုပေါ့ Justin ကို နားလည်ပေးနိုင်လွန်းလှပါတယ်ချစ်လွန်းလှပါတယ်ဆိုတဲ့ မင်းကကိုယ့်အတွက်အကောင်းဆုံးချစ်သူပါပဲဘာညာဆိုတဲ့ Hailey Baldwin ဟာ တကယ်တမ်းမှာ အားလုံးထင်နေကြသလို Justin ကို ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ချစ်လာခဲ့ပြီး သူ့မျက်နှာတစ်ကမ္ဘာထင်ကာ တစ်သက်လုံး Justin Bieber ကိုပဲမျှော်ငေးနေသူတော့မဟုတ်ပါဘူး။ Hailey မှာ Justin နဲ့ မတွဲခင်ကရော တွဲပြီးမှရော တွဲနေတုန်းရော မြောက်များလှတဲ့ ရည်းစားတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမယ့် Hailey က Selena လိုမဟုတ်ပဲဘဝကို သိုသိပ်လျို့ဝှက်စွာနေထိုင်တတ်သူမို့ သူ့ရည်းစားတော်တော်များများကို ပရိသတ်က သိလိုက်ရလေ့မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပြောချင်လွန်းလို့ page ကနေ ပရိသတ်ကြီးအတွက် Justin Bieber နဲ့ အချစ်ပင်လယ်ကြီးထဲအတူခုန်မချခင်က Hailey တွဲခဲ့ဖူးသမျှရည်းစားတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Drake ကတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာကလေးကအစ လူကြီးအဆုံးအလွတ်ရနေတဲ့ Kiki Do you love me ဆိုတဲ့ သီချင်းပိုင်ရှင်အဆိုိုတော်ပါ။ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းအဆိုတော် Drake နဲ့ စူပါမော်ဒယ် Hailey ဟာ 2016 မှာ အတည်တကျတွဲနေကြပြီး Drake က Hailey ရဲ့ နာမည်အစစာလုံး H ဆိုတဲ့ လော့ကတ်လေးပါတဲ့ ဆွဲကြိုးကိုဆွဲထားလေ့ရှိတာကို ပါပါရာဇီတွေက ဓာတ်ပုံရိုက်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် ထုံးစံအတိုင်းပဲ Hailey က တစ်ယောက်ယောက်နဲ့အတည်တကျတွဲတော့မယ်ဆိုတိုင်း Justin က Selena နဲ့ ရန်ဖြစ်ပြီး Hailey အနားကို ဒဏ်ရာတွေဆေးကြောဖို့ရောက်လာလေ့ရှိသလို Hailey ကလည်း Drake မကလို့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် လှည့်မကြည့်ပဲ Justin အတွက်တံခါးဖွင့်ထားခဲ့ပေးမြဲလေ။
ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း ဘတ်စကတ်ဘောသမား Jordan Clarkson နဲ့လည်း Hailey ကခဏတာတွဲခဲ့ပါသေးတယ်။ 2017 အစပိုင်းမှာ Hailey ဟာ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ဘတ်စကတ်ဘောသမားလေးနဲ့ ငြိတွယ်မိပြီး သံယောဇဉ်လေးတွေတန်းလိုက်ပါသေးတယ်။ Hailey က Jordan ရဲ့ ကစားပွဲတွေကိုသွားပြီးအားပေးလေ့ရှိခဲ့သလို သူတို့နှစ်ဦးလက်တွဲပြီးသွားလာနေတဲ့ ပုံတွေကိုလည်း ပရိသတ်တွေမြင်တွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်။ အနုပညာလောကထဲကမဟုတ်တဲ့ကောင်လေးနဲ့ Hailey တစ်ယောက် အဆင်ပြေပျော်ရွှင်နေပြီလို့ပရိသတ်တွေထင်စပြုချိန်မှာပဲ Selena က The Weeknd နဲ့ တွဲသွားလို့ အသည်းကွဲနေတဲ့ Justin ဟာ ယောင်ချာချာနဲ့ ဒဏ်ရာအနာတရတွေဗရပွနဲ့ Haliey အနားကိုရောက်လာပြီး Hailey ကလည်း ထုံးစံအတိုင်း အရာအားလုံးကိုပစ်ချလို့ Justin ကို ဆီးကြိုဖေးမပြီး ဒဏ်ရာတွေကိုကုစားပေးခဲ့ပြန်ပါတယ်။
တစ်ကမ္ဘာလုံးကကောင်မလေးတွေရဲ့အိပ်မက်မင်းသားလေးဖြစ်ပြီး ပြစ်မျိုးမှဲ့မထင်ချောမောလွန်းတဲ့ သရုပ်ဆောင်မော်ဒယ် Cameron Dallas နဲ့လည်း Hailey က ချစ်သူတွေဖြစ်လိုက်သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ Cameron က Hailey ကို တကယ်ကိုချစ်မြတ်နိုးခဲ့ပုံရပြီး Hailey ရဲ့ မိဘတွေကိုတောင်လိုက်တွေ့ခဲ့ပါသေးတယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် Hailey ကတော့ Justin ကလွဲပြီးမျက်လုံးထဲမြင်ခဲ့ပုံမပေါ်ပါဘူး။ Cameron ကိုအတည်ကြံခဲ့ပုံမရပဲ Justin သူ့ဆီပြန်မလာခင်လအနည်းငယ်သာ စိတ်ပြေလက်ပျောက်တွဲခဲ့ပြီး Cameron ဘက်က အတည်တကျလက်ထပ်ဖို့ပြင်ဆင်လာချိန်မှာတော့ အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးဆိုပြီးလမ်းခွဲခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ Cameron ကတော့ Hailey က သူ့ကိုအသည်းခွဲခဲ့တဲ့အကြောင်း Talk Show တစ်ခုမှာ နာကျင်စွာပြောပြခဲ့ဖူးပါတယ်တဲ့။
Shawn Mendes နဲ့ Hailey နဲ့ ကိစ္စကိုတော့ ပရိသတ်တော်တော်များများကြားလိုက်ကြမှာပါ။ Shawn နဲ့ Hailey နဲ့ ဟာအရမ်းကို ချစ်နေကြပြီး Met Gala ပွဲကိုလည်း အတူတက်ရောက်ခဲ့ကြသလို တည်မြဲတဲ့အချစ်ရေးကိုတည်ဆောက်ကြတော့မယ့် အလားအလာရှိနေခဲ့ပါတယ်။ Hailey က Shawn နဲ့ ချစ်သူဖြစ်ချင်တဲ့အကြောင်း Twitter မှာနောက်ပြောင်ခဲ့ဖူးပြီး Shawn နဲ့ Hailey နဲ့ ဖက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုလည်းပါပါရာဇီတွေက ရိုက်ယူနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ Shawn က Hailey ကို အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ဂရုစိုက်ပြီး Hailey ကလည်း ပျော်နေခဲ့ပါတယ်။ အရာအားလုံးဟာနေသားတကျအဆင်ပြေစွာ ဖြစ်တည်နေဦးမှာပါပဲ။ Justin Bieber သာ Selena နဲ့ နောက်ဆုံးအကြိမ်ထပ်လမ်းခွဲခဲ့ပြီးနောက် ပေတေလေလွင့်နေပြီး Hailey ရဲ့ ရင်ခွင်ထဲကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီး ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်မှာ Hailey ကို လက်ထပ်ခွင့်မတောင်းလိုက်ဘူးဆိုရင်ပေါ့။ ဘဝတစ်လျှောက်လုံးဘယ်သူနဲ့ပဲယှဉ်ယှဉ် Justin ကိုသာ ရွေးခဲ့တဲ့ Hailey ကတော့ နှစ်ခွန်းပြောစရာမလိုပဲ Shawn ကို ထားခဲ့တော့တာပါပဲ။ Shawn ကတော့ ရင်းနှီးတဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို “အရာအားလုံးအဆင်ပြေနေခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်သူ့ကိုအိမ်ပြန်ပို့ခဲ့တယ် နောက်တစ်နေ့တွေ့ကြမယ်နော်လို့ပြောတယ်။ နှုတ်ဆက်အနမ်းပေးတယ်။ နောက်ပြီးတော့ သူကျွန်တော့်ဆီက ပျောက်သွားခဲ့ပြီး ကျွန်တော်ကြားရတဲ့သတင်းက Justin Bieber နဲ့ သူစေ့စပ်လိုက်ပြီတဲ့”လို့ ရင်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။
အခုပြောပြသွားတာကတော့ Justin နဲ့လက်မထပ်ခင် Hailey တွဲခဲ့တဲ့ရည်းစားတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြောချင်လွန်းလို့ပရိသတ်ကြီးရော Hailey ကို Justin နဲ့ သဘောတူကြလား။ ဒါမှမဟုတ် ရည်းစားဟောင်းတွေထဲက တစ်ယောက်ယောက်နဲ့သဘောတူကြလား။ ပြောခဲ့ကြပါဦး။credit-ပြောချင်လွန်းလို့
ဇာတ်ကွက်မကျန်တော့ပေမယ့် ၃ လလောက်ပြသချိန်ကျန်နေသေးတဲ့ ဂင်္ဂါ
ပရိသတ်ကြီးရေ ဇာတ်လမ်းပြသနေတာ အချိန်အတော်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တဲ့ “မုဆိုးမလေး မဂင်္ဂါ” ဇာတ်လမ်းတွဲကလည်း TV ကြည့်ပရိသတ်တွေကို ဆွဲဆောင်မှုကောင်းကောင်းပြုလုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ တနင်္လာနေ့ကနေ သောကြာနေ့အထိ ည ၈ နာရီခွဲအချိန်မှာ ကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေကို ဆွဲဆောင်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ။ အခုဆိုရင်တော့ ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ ပြသမှုဟာ အပိုင်း ၅၃၀ ကျော်အထိသာ ရှိနေသေးတာပါ။
ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ စုစုပေါင်းဇာတ်လမ်းအပိုင်းဆက်ကတော့ ၅၉၀ ကျော်ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်လည်း လက်ရှိပြသနေတဲ့အချိန်ဇယားအရဆိုရင် “မုဆိုးမလေး မဂင်္ဂါ” ဇာတ်လမ်းတွဲပြီးဆုံးဖို့အတွက် နောက်ထပ် ၃ လလောက်စောင့်ဆိုင်းရဦးမှာပါ။
မိုမိုလေးပရိသတ်ကြီးရေ တကယ်တော့ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲက ဇာတ်သိမ်းခန်းကိုရောက်ရှိနေပါပြီ။ ဂင်္ဂါနဲ့ ရှိဗ်နဲ့ လက်ထပ်ပြီးကြပြီဆိုရင် ဒီဇာတ်လမ်းတွဲက ဇာတ်သိမ်းနေပါပြီ။ ဒါပေမယ့်လည်း အိန္ဒိယဇာတ်လမ်းတွဲတွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ဇာတ်လမ်းရိုက်ကူးမှုမှာ ရိုက်ကွက်တွေမျိုးမျိုးနဲ့ ဇာတ်လမ်းပြသချိန်တွေကြာမြင်နေဦးမှာပါ။
မိုမိုလေးပရိသတ်ကြီးရေ လက်ရှိဇာတ်မသိမ်းမီမှာတော့ ဂင်္ဂါတစ်ယောက် ရှိဗ်အပေါ်အထင်လွဲမှုတွေနဲ့အတူ နှစ်ဦးသားဘယ်လိုမျိုးအဆင်မပြေတဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေဆက်ရှိနေဦးမယ်ဆိုတာကို ကြည့်ရှုရမှာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း ဇာတ်လမ်းရဲ့အရှိန်ကတော့ အရင်ကလောက်အကောင်းဆုံးအခြေအနေမှာရှိမနေတော့တာတော့ အမှန်ပါပဲနော်။
မိုမိုလေးပရိသတ်ကြီးရေ လက်ရှိအချိန်မှာ ဂင်္ဂါဇာတ်လမ်းတွဲ ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်ဦးမယ်ဆိုတာကိုရော အရင်ကတော့ စိတ်ဝင်စားသူတွေရှိသေးရဲ့လား။ ကျန်ရှိနေတဲ့ဇာတ်လမ်းပိုင်းမှာတော့ ရှိဗ်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေအကောက်ကြံမှုတွေကို ဂင်္ဂါတစ်ယောက်ဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းပေးဦးမလဲဆိုတာကိုတော့ စိတ်ဝင်တစားဆက်ကြည့်ရဦးမှာပါနော်။ မိုမိုလေးပရိသတ်ကြီးကရော ဂင်္ဂါဇာတ်လမ်းတွဲကို ဆက်ပြီးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော်။
Like Stars On Earth ရုပ်ရှင်ရဲ့ လူသိနည်းတဲ့အချက်များ
၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယဒရာမာဇာတ်ကား Taare Zameen Par သို့ Like Stars On Earth ဟာ နာမည်ကျော်မင်းသား Aamir Khan ကိုယ်တိုင်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ပညာပေး ဇာတ်ကားတစ်ကားပါ။
ဒီဇာတ်ကားမှာ Aamir Khan ဟာ စာရေးစာဖတ်ရခက်ခဲတဲ့ Dyslexia ဝေဒနာသည် အနုပညာပါရမီရှင် ကလေးငယ်လေး Ishaan ကို ပျိုးထောင်ပေးရတဲ့ ဆရာအဖြစ် ပါဝင်ခဲ့တယ်။ ပြောချင်လွန်းလို့ တို့အတွက် ဒီရုပ်ရှင်ရဲ့ လူသိနည်းတဲ့အချက်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
(1)- ဒီရုပ်ရှင်ကားရဲ့ လှပတဲ့နာမည်ကို Aamir Khan ဟာ ပြိုင်ဘက်မင်းသား Salman Khan ဆီက ရတာပါ။ သူတို့ ပါတီတစ်ခုမှာ တွေ့ဆုံခဲ့ချိန် Salman Khan ပြောခဲ့တဲ့ အိုင်ဒီယာကို အသုံးပြုခဲ့တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သူ့ကို ခရက်ဒစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
(2)-. နာမည်ကျော်မင်းသားကြီး Amitabh Bachchan (အမီတာဘဂျမ်း) ရဲ့သားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Abhishek Bachchan ဟာလည်း Dyslexia ဝေဒနာသည်တစ်ဦးပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကို မှန်ကန်တဲ့ ပညာရေးနဲ့ ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၄ ခုနှစ်က ဘောလိဝုဒ် Blockbuster ရုပ်ရှင် Dhoom မှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သလို အောင်မြင်မှု ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ထည့်ပြောဖို့အတွက် Aamir Khan ဟာ Amitabh Bachchan ဆီကနေ လေးစားသမှုနဲ့ အရင်ဆုံး ခွင့်ပြုချက်ယူခဲ့ပါတယ်။
(3)- အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာ ဒီဇာတ်ကားကို ၂၀၀၉ ခုနှစ် အော်စကာဆုပေးပွဲမှာ အကောင်းဆုံး နိုင်ငံခြားဘာသာစကားပြော ရုပ်ရှင်ဆုအတွက် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြုအဖြစ် တင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဇကာတင်အဆင့်တောင် မပါခဲ့ဘဲ ဂျပန်ရုပ်ရှင် “Departures” က ရရှိခဲ့ပါတယ်။
(4)- Ishaan အဖြစ် သရုပ်ဆောင်တဲ့ Darsheel Safary ဟာ အလွန်ငယ်ရွယ်သေးတဲ့အပြင် ပိုက်ဆံလည်း အရမ်းမရှိတဲ့အတွက် သူ သရုပ်ဆောင်နေချိန်မှာ ပညာရေးနောက်မကျရအောင် Aamir Khan က ပိုက်ဆံစိုက်ထုတ် တာဝန်ခံပေးခဲ့ပါတယ်။
(5)- Ishaan ရဲ့ စည်းကမ်းတင်းကျပ်တဲ့ ဖခင်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်တဲ့ Vipin Sharma ဟာ ကလေးကို ဖြတ်ရိုက်ရမယ့် အခန်းမှာ ရိုက်ဖို့ တွန့်ဆုတ်နေခဲ့တဲ့အတွက် Darsheel က ရယ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Aamir Khan ဟာ Vipin ရဲ့ ချွေးတလုံးလုံးနဲ့ အင်္ကျီကို ယူဝတ်ကာ ကင်မရာကို သူ့နောက်ကျောမှာ နေရာချပြီး Ishaan ကို လူစားထိုးရိုက်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဲ့ဒီအခန်းမှာ ကလေးကိုရိုက်တာ Vipin မဟုတ်ပါဘူး၊ Aamir Khan ပါ။
(6)- နိုင်ငံတကာ Dyslexia ဝေဒနာသည်အဖွဲ့အစည်းဟာ ဒီဇာတ်ကားကို ၂၀၀၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်နေ့က အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ဆီယက်တဲလ်မြို့မှာ စုဝေးကြည့်ရှုခဲ့ကြပါတယ်။ ။
Like Stars On Earth ရုပျရှငျရဲ့ လူသိနညျးတဲ့အခကျြမြား
၂၀၀၇ ခုနှဈမှာ ထှကျရှိခဲ့တဲ့ အိန်ဒိယဒရာမာဇာတျကား Taare Zameen Par သို့ Like Stars On Earth ဟာ နာမညျကြျောမငျးသား Aamir Khan ကိုယျတိုငျပါဝငျသရုပျဆောငျရိုကျကူးထုတျလုပျခဲ့တဲ့ ပညာပေး ဇာတျကားတဈကားပါ။
ဒီဇာတျကားမှာ Aamir Khan ဟာ စာရေးစာဖတျရခကျခဲတဲ့ Dyslexia ဝဒေနာသညျ အနုပညာပါရမီရှငျ ကလေးငယျလေး Ishaan ကို ပြိုးထောငျပေးရတဲ့ ဆရာအဖွဈ ပါဝငျခဲ့တယျ။ ပွောခငျြလှနျးလို့ တို့အတှကျ ဒီရုပျရှငျရဲ့ လူသိနညျးတဲ့အခကျြတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
(1)- ဒီရုပျရှငျကားရဲ့ လှပတဲ့နာမညျကို Aamir Khan ဟာ ပွိုငျဘကျမငျးသား Salman Khan ဆီက ရတာပါ။ သူတို့ ပါတီတဈခုမှာ တှဆေုံ့ခဲ့ခြိနျ Salman Khan ပွောခဲ့တဲ့ အိုငျဒီယာကို အသုံးပွုခဲ့တာ ဖွဈတဲ့အတှကျ သူ့ကို ခရကျဒဈပေးခဲ့ပါတယျ။
(2)-. နာမညျကြျောမငျးသားကွီး Amitabh Bachchan (အမီတာဘဂမျြး) ရဲ့သားတဈဦးဖွဈတဲ့ Abhishek Bachchan ဟာလညျး Dyslexia ဝဒေနာသညျတဈဦးပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ သူ့ရဲ့အားနညျးခကျြကို မှနျကနျတဲ့ ပညာရေးနဲ့ ကြျောလှားနိုငျခဲ့ပွီး ၂၀၀၄ ခုနှဈက ဘောလိဝုဒျ Blockbuster ရုပျရှငျ Dhoom မှာ ပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့သလို အောငျမွငျမှု ရရှိခဲ့ပါတယျ။ ဒီအကွောငျးကို ရုပျရှငျထဲမှာ ထညျ့ပွောဖို့အတှကျ Aamir Khan ဟာ Amitabh Bachchan ဆီကနေ လေးစားသမှုနဲ့ အရငျဆုံး ခှငျ့ပွုခကျြယူခဲ့ပါတယျ။
(3)- အိန်ဒိယနိုငျငံဟာ ဒီဇာတျကားကို ၂၀၀၉ ခုနှဈ အျောစကာဆုပေးပှဲမှာ အကောငျးဆုံး နိုငျငံခွားဘာသာစကားပွော ရုပျရှငျဆုအတှကျ အိန်ဒိယနိုငျငံ ကိုယျစားပွုအဖွဈ တငျခဲ့ပါသေးတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဇကာတငျအဆငျ့တောငျ မပါခဲ့ဘဲ ဂပြနျရုပျရှငျ “Departures” က ရရှိခဲ့ပါတယျ။
(4)- Ishaan အဖွဈ သရုပျဆောငျတဲ့ Darsheel Safary ဟာ အလှနျငယျရှယျသေးတဲ့အပွငျ ပိုကျဆံလညျး အရမျးမရှိတဲ့အတှကျ သူ သရုပျဆောငျနခြေိနျမှာ ပညာရေးနောကျမကရြအောငျ Aamir Khan က ပိုကျဆံစိုကျထုတျ တာဝနျခံပေးခဲ့ပါတယျ။
(5)- Ishaan ရဲ့ စညျးကမျးတငျးကပျြတဲ့ ဖခငျအဖွဈ သရုပျဆောငျတဲ့ Vipin Sharma ဟာ ကလေးကို ဖွတျရိုကျရမယျ့ အခနျးမှာ ရိုကျဖို့ တှနျ့ဆုတျနခေဲ့တဲ့အတှကျ Darsheel က ရယျခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Aamir Khan ဟာ Vipin ရဲ့ ခြှေးတလုံးလုံးနဲ့ အကငြ်ျီကို ယူဝတျကာ ကငျမရာကို သူ့နောကျကြောမှာ နရောခပြွီး Ishaan ကို လူစားထိုးရိုကျခဲ့ရပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အဲ့ဒီအခနျးမှာ ကလေးကိုရိုကျတာ Vipin မဟုတျပါဘူး၊ Aamir Khan ပါ။
(6)- နိုငျငံတကာ Dyslexia ဝဒေနာသညျအဖှဲ့အစညျးဟာ ဒီဇာတျကားကို ၂၀၀၈ ခုနှဈ အောကျတိုဘာ ၂၉ ရကျနကေ့ အမရေိကနျနိုငျငံ၊ ဆီယကျတဲလျမွို့မှာ စုဝေးကွညျ့ရှုခဲ့ကွပါတယျ။ ။
“​အောင်​လ အန်​ဆန်း ​ပေး​သော သင်​ခန်းစာ”
နာ မည်​​လေး နှစ်​လက်​မ​လောက်​ ကြီးတဲ့သူ​တွေက
( ဓာတ်​ပုံထဲက အ​တွေး )
ဂျိမ်းစ်ဘွန်း ရဲ့ အချက်အလက်တချို့
ကမ္ဘာကျော် ဂျိမ်းစ်ဘွန်းဇာတ်ကောင်ကို စတင်ဖန်တီးသူကတော့ အင်္ဂလိပ်လူမျိုး စာရေးဆရာနဲ့ ဂျာနယ်လစ်တစ်ဦးဖြစ်သူ အီယန် ဖလဲမင်း (Ian Lancaster Fleming) ဖြစ်ပြီး သူဟာ ဒုတိယကမ္ဘာ စစ်ကာလအတွင်းက ဗြိတိသျှတော်ဝင်ရေတပ်ရဲ့ ထောက်လှမ်းရေးဌာနမှာ စစ်မှုထမ်းခဲ့ သူဖြစ်ပါတယ်။
ယင်းကာလက သိကျွမ်းခဲ့တဲ့ ဗြိတိန်တော်ဝင်ရေတပ်ထောက်လှမ်းရေး ကွန်မန်ဒိုတွေကို အခြေခံ ပြီး ဂျိမ်းစ်ဘွန်းဇာတ် ကောင်ကို ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာကျော်ရုပ်သံ ဇာတ်ကားအဖြစ် နာမည်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးဂျိမ်းစ်ဘွန်းဝတ္ထုကတော့ Casino Royale ဖြစ်ပြီး (၁၉၅၃) ခုနှစ်က ထုတ်ဝေခဲ့ ပါတယ်။
Ian Lancaster ဟာ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းဆိုတဲ့နာမည်ကို အမေရိကန်လူမျိုးငှက်မျိုးစိတ် လေ့လာရေးပညာရှင် ဒေါက်တာဂျိမ်းစ်ဘွန်းဆိုသူထံမှ ဆင့်ပွားရယူခဲ့တာဖြစ်ပြီး သူရဲ့ဇာတ်လမ်းထဲမှာတော့ အဓိက ဇာတ်ကောင်ဂျိမ်းစ်ဘွန်းဟာ လန်ဒန်မြို့မှာအခြေစိုက် ပြီးကမ္ဘာအနှံ့ထောက်လှမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေကို လိုက်လံဆောင်ရွက်နေသူ အထူးအေးဂျင့် တစ်ဦးအဖြစ် ပုံဖော်ထားပါတယ်။
ဂျိမ်းစ်ဘွန်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်နံပါတ်ဟာ (၀၀၇)ဖြစ်ပြီး ဗြိတိန်လျို့ဝှက် ထောက်လှမ်းရေးဌာနခွဲ(၆)မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ပါတယ်။ ဇာတ်ကားတွေထဲမှာတော့ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းဟာ ခေတ်လွန်နည်းပညာမြင့်ပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုလေ့ရှိသလို တွဲဖက်သရုပ်ဆောင် အမျိုးသမီးများရဲ့စွဲမက်ဖွယ်ရာ သရုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ ဝက်ဝက်ကွဲအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဂျိမ်းစ်ဘွန်းဝတ္ထုတွေအတွင်းမှာတော့ သူဟာစကော့လူမျိုးဖခင် Andrew Bond နဲ့ ဆွစ်ဇာလန်လူမျိုးမိခင် Monique Delacroix Bond တို့ကမွေးဖွားခဲ့တဲ့ စကော့-ဆွိဇာလန် ကပြားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူရဲ့မိဘတွေကတော့ ဘွန်း(၁၁)နှစ်အရွယ်ထဲက ပြင်သစ်က Alps တောင်တက်လမ်းမှာကားမတော်တဆမှုနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့ရရှာပါတယ်။
မိဘမဲ့ကလေး တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကြီးပြင်းလာရတဲ့ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းဟာ ဆေးလိပ်အလွန်ကြိုက်သူဖြစ်ပြီး တစ်နေ့ကို စီးကရက် အလိပ်ပေါင်း ဒါဇင်နဲ့ချီပြီး သောက်လေ့ရှိသူဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကလည်း ဂျိမ်းစ်ဘွန်းဇာတ်ကောင်တီထွင်သူ Ian Fleming ကိုယ်တိုင်က ဆေးလိပ်အလွန်ကြိုက်ပြီး တစ်နေ့ကိုအများဆုံး စီးကရက်အလိပ်(၈၀)လောက်အထိ သောက်ဖူးတယ်လို့ ဖွင့်ဟဖူးပါတယ်။
Ian Fleming ဟာ ဒုတိကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းမှာပဲ ဂျာမေကာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီး Golden eye အမည်ရတဲ့အရပ်မှာ အခြေချပြီး ဂျိမ်းစ်ဘွန်းဝတ္ထုတွေကိုဖန်တီးရေးသားခဲ့ပါတယ်။
Ian ဟာသူမသေဆုံးသေးတဲ့အချိန်အထိ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းအပါအဝင် စွန့်စားမှုဝတ္ထု(၁၄)အုပ်လောက်ကိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ သူရဲ့အဓိကဇာတ်ဆောင် ဂျိမ်းစ်ဘွန်းရဲ့စွန့်စားခန်းဝတ္ထုတွေဟာ နာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်တွေ အဖြစ် ဆက်တိုက်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့ ၁၇ကားမြောက်မှာတော့ သရုပ်ဆောင် Pierce Brosnan ကို ဂျိမ်းစ်ဘွန်းမင်းသားသစ်အဖြစ် နာမည်ကြီးလာစေခဲ့ပါတယ်။
အံ့သြသင့်စရာကောင်းတာကတော့ ယင်းကာလက နာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် တွေဖြစ်တဲ့ Adam Weat, Clint Eastwood, Burt Reynolds စသူတွေဟာ ဂျိမ်းစ်ဘွန်း ဇာတ်ဆောင်အဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ဖို့ ငြင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့အားလုံးရဲ့ အကြောင်းပြချက်ကတော့ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းဇာတ်ကားဟာ သူတို့ကို နာမည်ကြီးစေမယ့် ဇာတ်ကား ဖြစ်ပေမဲ့ ဝတ္ထုရဲ့အဓိက ဇာတ်ဆောင်ဟာ အင်္ဂလိပ်လူမျိုးသရုပ်ဆောင်ပဲ ဖြစ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့အချက် ဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့အချိန်ထိ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းအဖြစ်သရုပ်ဆောင်မင်းသား (၇)ဦးကသရုပ် ဆောင်ခဲ့ကြပြီး သူတို့ကတော့ Sean Connery, David Niven , George Lazenby ,Roger Moore , Timothy Dalton, Pierce Brosnan နဲ့ Daniel Craig တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ နောက်ဆုံး ဂျိမ်းစ်ဘွန်းရုပ်ရှင်ကတော့ ယခုအသက်(၅၀)ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Daniel Craig ပါဝင်သရုပ် ဆောင်ထားတဲ့ Spectre ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး သူဟာ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းရုပ်ရှင်စီးရီးတွေ စတင်ရိုက် ကူးတဲ့ (၁၉၆၂) ခုနှစ်နောက်ပိုင်း မွေးဖွားတဲ့ ပထမဆုံး ဂျိမ်းစ်ဘွန်းမင်းသား အဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်သွားပါတယ်။
Bond 25 ဇာတ်ကားကတော့ ၂၀၂၀ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိမှာပါ။
ဂျိမ်းစ်ဘွန်းရဲ့ ကိုယ်ပိုင်နံပါတ်ဖြစ်တဲ့ (၀၀၇)ဆိုတဲ့ နံပါတ်ကတော့ အခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီနံပါတ်ဟာ လန်ဒန်ကနေ Canterbury ကိုပြေးဆွဲနေတဲ့ ဘတ်ကားရဲ့နံပါတ်ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ စာရေးဆရာ Ian Fleming ဟာ(၀၀၇)ဆိုတဲ့ အဲဒီဘတ်ကားလိုင်းကို မကြာခဏ စီးနင်းနေရာမှ သူရဲ့ဂျိမ်းစ်ဘွန်းဝတ္ထုတွေအတွင်းမှာ ထည့်သွင်းရေးသားဖို့ စိတ်ကူးရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
နာမည်ကျော် ဂျိမ်းစ်ဘွန်းမင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ရှောင်ကွန်နရီ (Sean Connery) က ဂျိမ်းစ်ဘွန်းဇာတ် ကားတစ်ခုလုံးကို သရုပ်ဆောင်နေချိန်အတွင်းမှာ ဆံပင်တုကိုတပ်ဆင်ပြီး သရုပ်ဆောင် ခဲ့ရပါတယ်။
အကြောင်းကတော့ သူဟာ အသက်(၂၁)နှစ်အရွယ်ကတည်းက ထိပ်ပြောင်လာခဲ့တဲ့ အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါအပြင် Sean Connery ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Never Say Never Again ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာ သူရဲ့ကိုယ်ခံပညာ လေ့ကျင့်ရေးရေးနည်းပြဟာ ကမ္ဘာကျော်အက်ရှင်မင်းသား Steven Seagal ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ တွဲဖက်လေ့ကျင့်ရေးထရိန်နင်တစ်ခုမှာတော့ Steven Seagal နဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ မတော်တဆမှုတစ်ခုကြောင့် Sean Connery ရဲ့ လက်ကောတ်ဝတ်အရိုး ကျိုးသွားခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကိုတော့ သိရှိသူအလွန် နည်းပါတယ်။
နာမည်ကျော်ဂျိမ်းစ်ဘွန်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေဖြစ်တဲ့ Never Say Never Again နဲ့ Thunderball ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားတွေရဲ့ ဇာတ်အိမ်ဟာတူညီနေပြီး မင်းသားအဖြစ် Sean Connery တစ်ဦးတည်းက ဇာတ်ကား(၂)ုလုံးမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ (၁၉၆၄) ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Goldfinger ဂျိမ်းစ်ဘွန်းရုပ်ရှင်ကတော့ လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီး ဂျိမ်းစ်ဘွန်းသရုပ်ဆောင် Sean Connery ဟာလည်း ဂျိမ်းစ်ဘွန်းသရုပ်ဆောင်မင်းသားတွေ အနက် အကောင်းဆုံးမင်းသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ကား မှာတော့ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းဟာသူရဲ့နာမည်ကျော် Aston Martin ကားကိုပထမဆုံး စီးနင်းသရုပ်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့အပြင် နည်းပညာခေတ်လွန်ကိရိယာတန်ဆာပလာတွေကို ချပြသုံးစွဲပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကရုပ်ရှင်ကြည့် ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အာရုံကိုဖမ်းစားခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ Goldenfinger ဇာတ်ကားအတွင်းမှာပဲ ပထမဆုံးသော လေဆာရောင်ခြည်လက်နက်ကို အသုံးပြုပြီး သရုပ်ဆောင်ရတဲ့ပြကွက်တွေကို ထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်။
ဂျိမ်းစ်ဘွန်းကားတွေရဲ့နောက်ထပ် စိတ်ဝင်စားစရာအချက်ကတော့ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းမင်းသား အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ဘူးတဲ့ George Lazenby ဟာ နာမည်ကျော်မော်ဒယ်တစ်ယောက်သာဖြစ်နေပြီး သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျိမ်းစ်ဘွန်း မင်းသားတွေအနက် လူကြိုက်အနည်းဆုံးမင်းသားအဖြစ် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရတဲ့ George Lazenby ဟာ သူရဲ့ကိုယ်ပိုင်စတိုင်နဲ့ ထုတ်လုပ်သူကို ကိုယ်တိုင်သွားရောက်တွေ့ဆုံပြီး နောက်မှာတော့ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းမင်သားအဖြစ် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီး (၁၉၆၉) ခုနှစ်မှာ ထုတ်ဝေခဲ့ တဲ့ On Her Majesty’s Secret Service ဇာတ်ကားမှာသရုပ်ဆောင်ခွင့်ရရှိ ခဲ့ပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်မထုတ်ခင် (၁၉၆၈)အချိန်ထိ သြစတေးလျနိုင်ငံသား George Lazenbyဟာ ကမ္ဘာကြေးအမြင့်ဆုံး အမျိုးသားမော်ဒယ်တစ်ယောက် အဖြစ်ရပ်တည်နေခဲ့တာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဂျိမ်းစ်ဘွန်းဇာတ်ကားထုတ်လုပ်သူတွေရဲ့ အချို့သော အယူသည်းမှုတွေကလည်း ထူးဆန်းပါတယ်။ အဖြစ်ကတော့ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းမင်းသားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Pierce Brosnan နဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ချုပ်ဆိုတဲ့စာချုပ်အတွင်းမှာ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းမင်းသားရဲ့ အမှတ်အသားလို ဖြစ်နေတဲ့ tuxedo(ညစာစားပွဲ)ဝတ်စုံကို ဂျိမ်းစ်ဘွန်းဇာတ်ကားတွေမှလွဲပြီး အခြားမည်သည့် ဇာတ်ကားတွင်မှ မဝတ်ဆင်ရန် မင်းသား Pierce Brosnan ကိုမေတ္တာ ရပ်ခံတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါအပြင် Pierce Brosnan ဟာ For Your eyes Only ဆိုတဲ့ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းဇာတ်ကားအတွင်းမှာပဲ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Cassandra Harris နဲ့လက် ထပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကတော့ သြစလေးလျရုပ်ရှင်မင်းသမီး Cassandra Harris ဟာ သူမရဲ့ ပထမဆုံးဂျိမ်းစ်ဘွန်းဇာတ်ကားမထွက်ချိန်မှာပဲ သားအိမ်ကင်ဆာ ရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့ရပါတယ်။
Dr.No ဇာတ်ကားကနေ Quantum of Solace ဇာတ်ကားအထိ အဓိကသရုပ်ဆောင် ဂျိမ်းစ်ဘွန်းဟာ လူပေါင်း(၃၅၂)ယောက်ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းမင်းသားတွေအနက်မှာတော့ Pierce Brosnan ဟာ လူအသတ်ဆုံးမင်းသားအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး Golden Eye ဇာတ်ကား အတွင်းမှာပဲ လူ(၄၇)ယောက်အထိ သတ်ခဲ့ပါတယ်။
Sean Connery ကတော့ အငြိမ်းချမ်းဆုံး ဂျိမ်းစ်ဘွန်းဇာတ်ကောင်လို့ယူဆရမှာဖြစ်ပြီး Dr No ရုပ်ရှင်ကား မှာလူ(၄)ယောက်ကိုသာ ရှားရှားပါးပါးသတ်ခဲ့ရပါတယ်။
သရုပ်ဆောင်စဉ်အတွင်းမှာ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းကိုင်ဆောင်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ Walther PPk ဟာ နာဇီခေါင်းဆောင် ဟစ်တလာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဆုံးစီရင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့ သေနတ်နဲ့ မော်ဒန်အမျိုးအစားတူညီပါတယ်။ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းဟာ သူရဲ့သရုပ်ဆောင်ကာလအတွင်း သေနတ်အကြိမ်ပေါင်း (၄၆၆၂)ချက် ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဂျိမ်းစ်ဘွန်းမင်းသားအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ မင်းသားအားလုံးရဲ့ အရပ်အမောင်းဟာ (၆ပေ၁)ကနေ(၆ပေ၂)အထိရှိကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပေမဲ့ Daniel Craig ကတော့အရပ်အပု ဆုံးဂျိမ်းစ်ဘွန်းလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပြီး (၅)ပေ(၁၀)လက်မသာရှိပါတယ်။
ယခုမျှဝေပေးခဲ့တာ ကတော့ နာမည်ကျော် ဂျိမ်းစ်ဘွန်းဇာတ်ကားတွေ အတွင်းက ပရိတ်သတ်တွေ သတိမပြု မိလောက်တဲ့ အကြောင်းအရာအချို့ဖြစ်ပြီး ဂျိမ်းစ်ဘွန်းချစ်သူတွေအနေနဲ့ ကျေနပ်ကြလိမ့် မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ။
အကောင်းဆုံးလက်ဝှေ့ဖိုက်တာတွေနဲ့ လေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ အောင်လအန်ဆန်း
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးကလေးစားအားကျနေရတဲ့ မြန်မာ့ကိုယ်စားပြု One Championship (MMA) ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံကြီး အောင်လအန်ဆန်းရဲ့အောင်မြင်မှုကို အားလုံးလည်း လေးစားကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ပွဲကောင်းများစွာကို ထိုးသတ်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးက လက်ဝှေ့သမားများစွာရဲ့ လေးစားမှုကို ရရှိထားတဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ လက်ရှိအောင်လအန်ဆန်းကတော့ ဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး မကြာမီယှဉ်ပြိုင်မည့်ပြိုင်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။
ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်တွေ့ဆုံရမယ့်ဂျပန်ဖိုက်တာ ခန်ဟစဲဂါဝါပွဲကတော့ သူ့အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာပွဲတစ်ပွဲဖြစ်နေပြီး ဂျပန်နိုင်ငံမှာသွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ အောင်လအန်ဆန်းကတော့ ပြိုင်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေပြီး ကမ္ဘာ့အဆင့်မီဖိုက်တာကြီးတွေကို ခေါ်ယူလေ့ကျင့်လျှက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။
အဆိုပါ ခေါ်ယူလေ့ကျင့်မှုတွေထဲမှာ တောင်အာဖရိကရဲ့ အကောင်းဆုံးဖိုက်တာစာရင်းဝင် Dricus “Stillknocks” du Plessis နှင့် Gilbert “Durinho” Burns တို့လည်း ပါဝင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲအတွက် အဓိကလိုအပ်ချက်တွေကိုပြင်ဆင်နိုင်ရန်နှင့် အတူတကွလေ့ကျင့်ရန်ခေါ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး လက်ရှိလေ့ကျင့်မှုတွေကို အချိန်တွေကို ဖြတ်သန်းနေရကြောင်း သိရပါတယ်။ ပရိသတ်အကြိုက်ပွဲကောင်းတစ်ပွဲဖြစ်လာမည့် အဆိုပါ A NEW ERA ပြိုင်ပွဲကြီးအတွက် အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော်အောင်လရဲ့ လက်တလောပုံရိပ်လေးတွေကို ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
အကောငျးဆုံးလကျဝှဖေို့ကျတာတှနေဲ့ လကေ့ငျြ့မှုတှပွေုလုပျနတေယျဆိုတဲ့ အောငျလအနျဆနျး
ကမ်ဘာ့နိုငျငံအသီးသီးကလေးစားအားကနြရေတဲ့ မွနျမာ့ကိုယျစားပွု One Championship (MMA) ကမ်ဘာ့ခနျြပီယံကွီး အောငျလအနျဆနျးရဲ့အောငျမွငျမှုကို အားလုံးလညျး လေးစားကွမယျထငျပါတယျ။ ပှဲကောငျးမြားစှာကို ထိုးသတျခဲ့ပွီး ကမ်ဘာ့နိုငျငံအသီးသီးက လကျဝှသေ့မားမြားစှာရဲ့ လေးစားမှုကို ရရှိထားတဲ့သူတဈယောကျဆိုလညျး မမှားပါဘူး။ လကျရှိအောငျလအနျဆနျးကတော့ ဂပြနျနိုငျငံကိုရောကျရှိနပွေီဖွဈပွီး မကွာမီယှဉျပွိုငျမညျ့ပွိုငျပှဲအတှကျပွငျဆငျမှုတှပွေုလုပျနပွေီဖွဈကွောငျးသိရပါတယျ။
ဒုတိယအကွိမျပွနျလညျတှဆေုံ့ရမယျ့ဂပြနျဖိုကျတာ ခနျဟစဲဂါဝါပှဲကတော့ သူ့အတှကျစိတျလှုပျရှားစရာပှဲတဈပှဲဖွဈနပွေီး ဂပြနျနိုငျငံမှာသှားရောကျယှဉျပွိုငျရမှာဖွဈတဲ့အတှကျ ပထမဆုံးအတှအေ့ကွုံတဈခုဖွဈကွောငျးကိုလညျး ပွောပွထားတာပဲဖွဈပါတယျ။ လကျရှိ အောငျလအနျဆနျးကတော့ ပွိုငျပှဲအတှကျပွငျဆငျမှုတှပွေုလုပျနပွေီး ကမ်ဘာ့အဆငျ့မီဖိုကျတာကွီးတှကေို ချေါယူလကေ့ငျြ့လြှကျရှိကွောငျးသိရပါတယျ။
အဆိုပါ ချေါယူလကေ့ငျြ့မှုတှထေဲမှာ တောငျအာဖရိကရဲ့ အကောငျးဆုံးဖိုကျတာစာရငျးဝငျ Dricus “Stillknocks” du Plessis နှငျ့ Gilbert “Durinho” Burns တို့လညျး ပါဝငျခဲ့တာတှရေ့ပါတယျ။ ပွိုငျပှဲအတှကျ အဓိကလိုအပျခကျြတှကေိုပွငျဆငျနိုငျရနျနှငျ့ အတူတကှလကေ့ငျြ့ရနျချေါဆောငျခဲ့တာဖွဈပွီး လကျရှိလကေ့ငျြ့မှုတှကေို အခြိနျတှကေို ဖွတျသနျးနရေကွောငျး သိရပါတယျ။ ပရိသတျအကွိုကျပှဲကောငျးတဈပှဲဖွဈလာမညျ့ အဆိုပါ A NEW ERA ပွိုငျပှဲကွီးအတှကျ အကောငျးဆုံးပွငျဆငျမှုတှပွေုလုပျနတေဲ့ ပရိသတျအခဈြတျောအောငျလရဲ့ လကျတလောပုံရိပျလေးတှကေို ခဈြပရိသတျတှအေတှကျမြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။
ချစ်သူ မြန်မာမလေး ကို အရမ်းေ ဟာ့ရှော့ေ တွ ဝတ်တာမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ Mikis
ဥေ ရာပနိုင်ငံသားဆိုပေမယ့်လည်း မြန်မာစကားကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ပြောတတ်ပြီး မြန်မာပရိသတ်အများအပြားရရှိထားတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတယောက်ကို ပြပါဆိုလျှင် Mikis ကိုပဲ ပြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျာမနီနိုင်ငံသားဆိုပေမယ့်လည်း မြန်မာနိုင်ငံကို ချစ်မြတ်နိုးပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲ အခြေချနေတဲ့ Mikis ကတော့ လက်ရှိမှာဆိုရင် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မြန်မာမလေး စုစုဝေနဲ့ ချစ်သူတွေဖြစ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အားကျစရာကောင်းတဲ့ သူတို့ရဲ့ အချစ်ရေးနဲ့ တယောက်ကိုတယောက်ဘယ်လိုနားလည်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ အင်တာဗျူးမှာ ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
SundayJournal နဲ့ အင်တာဗျူးမှာတော့ Mikis ကတော့ အဝတ်စားဝတ်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး “ကျွန်တော်လုံးဝ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝတ်ရတာကို ကြိုက်တယ်။ ကြပ်ထုတ်နေတာမျိုးကို မကြိုက်ဘူး။ လမ်းဘေးက စတိုင်လ်မျိုးပေါ့”
မြန်မာဝတ်စုံဝတ်ရတဲ့ ခံစားချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး “ကျွန်တော် သဘောကျနေတယ်။ ဘုရားသွားရတာတွေ ကြိုက်တယ်။ မြန်မာဝတ်စုံကတော့ ပွဲတက်ဘာညာချိန်မှာ ဝတ်တယ်။ ပုံမှန်သွားတာလာတာကတော့ ပုံမှန် Mikis စတိုင်လ်ပါပဲ”
ချစ်သူကို ဘယ်လိုပုံစံဝတ်ရင် လှမယ်ထင်လဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းကိုတော့ “အဝတ်ကတော့ ကျွန်တော့်အတွက်အရေးမကြီးတော့ဘူးလေ။ စိတ်နဲ့ပဲလှသွားတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အရမ်းကြီး ဟော့ရှော့ဝတ်တာ မကြိုက်ဘူးလေ။ ကျွန်တော်ရိုးရိုး ဝတ်တာကို ကြိုက်တယ်။ ဟော့ရှော့တွေ အရမ်းတိုတဲ့ စကပ်တွေ ဝတ်တာမကြိုက်ဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း သူကအဲ့လိုမဝတ်တော့ စိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူး”
စုစုဝေကတော့ “သူအဲ့လိုလေးတွေ ဖြစ်တာသဘောကျပါတယ်။ ကိုယ်က အတိုလေးတွေ ဝတ်ရင်တောင် သူက မင်းနည်းနည်းမတိုနေဘူးလားလို့ ပြောလို့ နောက်ပိုင်းမှာတော့ အတိုတွေတောင် မဝတ်ဖြစ်တော့ပါဘူး။ ညီမနဲ့လည်း အတိုတွေက သိပ်ပြီးတော့ မလိုက်ဘူးလို့ထင်တယ်။ ညီမကတော့ ဒူးအောက်ဖုံးတဲ့ စကပ်တွေပဲ ဝတ်ဖြစ်တာ များပါတယ်”
Sexy ဝတ်တဲ့ကောင်မလေးတွေနဲ့ တွေ့ရင် သဝန်တိုလားဆိုတဲ့ အပေါ်မှာတော့ “အဲ့လိုမျိုးတော့ မရှိ်ပါဘူး။ လူတိုင်းကတော့ သူ့အလှနဲ့သူပဲလေ။ ကိုယ်နဲ့အလိုက်ဖက်ဆုံးဝတ်ထားရင်တော့ အဆင်ပြေတယ်။ သူကလည်း အရမ်းကြီး Sexy ဝတ်ထားရင် မကြိုက်ဘူးလေ”
မြန်မာမိန်းကလေးတယောက်နဲ့ ချစ်သူဖြစ်ရတဲ့ အားသာချက်ကတော့ “ ကျွန်တော်စုစုနဲ့ ရှိကတည်းက ကျွန်တော့်ဘဝက ပိုပြီးတော့ အဆင်ပြေလာတယ်။ မျှော်လင့်ချက်တွေ ရှိလာတယ်။ ကျွန်တော်တယောက်ထဲဆိုရင် ရေဘဝဲ ပုံစံလိုမျိုး ဟိုဖက်သွားဒီဖက်သွားနဲ့ မျှော်လင့်ချက်မရှိတော့ဘူး။ စုစုရှိတော့ ကျွန်တော့်ပန်းတိုင်ရှိလာတယ်။ ပြီးတော့သူက ကျွန်တော့်ဘဝမှာ အများကြီး ဂရုစိုက်ပေးတယ်လေ။ ထမင်းချက်ဘာညာလုပ်ပေးတယ်။ တခုကတော့ သူနဲ့ရှိတဲ့အချိန်ကစပြီး ရစ်တာတွေရှိတယ်။ တိုင်ပတ်တာတွေ ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် အမြဲတမ်းရန်ဖြစ်ရင်တော့ ခဏပဲကြာတယ်”
စုစုဝေကတော့ Mikis နဲ့ ပတ်သက်ပြီး “ညီမကတော့ ရစ်တာပိုများတယ်။ သူကတော့ နည်းနည်းထူးဆန်းတယ် တခါတလေတော့လည်း ရစ်တတ်တယ်။ သူကသိပ်ပြီးတော့ သဝန်တိုတတ်တာတွေ မရှိဘူး။ ညီမတို့ကြားမှာ တယောက်နဲ့ တယောက် ယုံကြည်ချက်နဲ့ တည်ဆောက်ထားတာဆိုတော့ တခြားကောင်လေးတွေနဲ့ စွပ်စွဲတာတွေ မရှိဘူး။ ပြီးတော့ ညီမအလုပ်ကလည်း ဒါတွေနဲ့မကင်းဘူးလေ။ ညီမက အားကစားနည်းပြ ဆရာမလုပ်တဲ့အတွက် ညီမရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ယောကျာ်းလေးတွေနဲ့ ပတ်သက်ရတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အဲ့ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူ့မှာ သဝန်တိုမှုတွေ ဘာမှ မရှိပါဘူး” ဟု ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။